Nezvedu - Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.
Wilk International Kutengeserana (Weifang) Co., Ltd.ibhizimusi rakazara rinobatanidza kutsvagisa kwesainzi, kugadzira uye kutengesa. Inowanikwa muLaizhou City, Shandong Province, hombe yekugadzira michina yemishini yekuvaka, michina yekuvaka uye michina yekurima munyika. Iyo hombe yekugadzira: Wheel Loader, zvigadzirwa zvekuchera, Yega Kuisa Concrete Masanganiswa, 4 vhiri dhiraivha forklift rori, Backhoe Loader uye mimwe michina midiki yekuvaka. Parizvino, bhizinesi rinofukidza nyika dzinopfuura makumi matanhatu nenharaunda dzinosanganisira Japan, South Korea, Brazil, Mexico, Dubai, Australia, South Africa uye Middle East, Central Asia, Southeast Asia, uye European Union.
Kambani yedu inonyanya kuburitsa michina yekuchera, yekuchera, Yekusika Konkrete Masanganiswa, 4 vhiri dhiraivha forklift rori nezvimwe Zvigadzirwa zvinonyanya kutengeswa kumatunhu anopfuura makumi maviri muChina nekutengesa kune dzakawanda nyika nenzvimbo muAfrica, Southeast Asia, South America neRussia.
Iyo kambani inotora tekinoroji yeGerman kuburitsa, inounganidza ruzivo, uye inosanganisa kuenderera kunatsiridzwa kubva kune ruzivo rwekushandisa runoshandiswa nevashandisi vanobva pasirese, kunyatso tarisa izvo chaizvo zvinodiwa nevashandisi, uye zvishoma nezvishoma inosimbisa ye Ultra-yakaoma mhando manejimendi manejimendi kugadzirwa kwekutarisa system uye akakwana, nekukurumidza uye nenguva mushure mekutengesa-zvikamu zvekupa sevhisi network. Panyaya yemhando yekuvandudza bhizinesi, inoenderana neyekuvandudza maitiro e-commerce, uye inoongorora nzira itsva ye "Internet + yechinyakare yekugadzira" inokodzera kuzvivandudza kwayo.
Hunhu uye mashandiro evatakuri vhiri uye 4 vhiri rekutyaira forklift rori vari munzvimbo inotungamira yeindasitiri mukati merudzi uye inogamuchirwa nevashandisi. Iye zvino, "WIK" brand Wheel loaders uye Yega Kuisa Concrete Masanganiswa akagamuchira kugamuchirwa nevatengesi uye anoshandisa kwese kuChina.
Isu tinotarisa pane mhando, mashandiro uye kufunga kwevashandisi senguva dzose. Mune manejimendi, isu takawana nhanho nyowani nekutora ISO9001: 2000 yepasi rose mhando manejimendi manejimendi manejimendi.
Kambani yekambani uzivi ndeiyi: kutsvaga chokwadi uye hunyanzvi, kutsvaga kurarama nehunhu, kutsvaga budiriro nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, kutsvaga vimbiso nebasa rakanaka uye rakakwana, kuzvikunda pachedu, uye kuyedza kugadzira zita renyika dzese. Uye isingaregi R & D uye hunyanzvi. Kugadzira zvigadzirwa zvemakwikwi uye masevhisi kune vatengi vedu.